Bogga ugu weyn Bangiyada ugu Fiican New York sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Bangiyadu waxay ku hawlan yihiin xaqiijinta khasnadaha maaliyadeed. Si kastaba ha ahaatee, waxay u kala qaybiyeen meelo kale oo muhiim u ah hay'adda maaliyadeed. Runta marka la sheego, ma wada qarin karno lacagteena oo dhan guriga iyo fikradda ah in xoogaa dulsaar ah lagu siiyo lacagtaada ma aha dalab aad ka hortagi lahayd, markaa, waxaad u baahan doontaa adeegyada bangiga.
Markaad dooranayso bangiyada, ma dooranayso bangi uun. Waa inaad hubisaa inay leeyihiin dulsaar weyn, ikhtiyaarrada akoonnada ku habboon, adeegga macaamiisha waxtarka leh, iyo ku habboonaanta bangiyada guud. Lahaanshaha tiro xisaabeed oo wanaagsan waxay u fiican tahay miisaaniyadaaga marka aad u qaybin karto miisaaniyad walaac yar.
Maqaalkan, waxaan ku soo koobi doonaa diiradeena bangiyada ugu fiican New York. Waxaan si dhakhso ah u aqoonsan doonaa tiro wanaagsan oo iyaga ka mid ah oo si taxaddar leh u fiirinaya dulsaarka, noocyada koontada, iyo wax badan oo dhan.
Maxaa ka dhiga Bangiyada New York mid gaar ah?
Sida laga soo xigtay Wikipedia, New York, waa magaalada ugu dadka badan Mareykanka. Iyada oo lagu qiyaasey dadka ku nool 2019 oo ah 8,336,817 oo loo qaybiyey qiyaastii 302.6 mayl laba jibaaran (784 km2), Magaalada New York sidoo kale waa magaalada ugu dadka badan Mareykanka.
Dad weyne aad bay ugu fiican yihiin ganacsiga maadaama ay kor u qaadeyso tartanka suuqa ee adeeg bixiyayaasha la midka ah. Tani waa wax weyn, maadaama ay kordhin doonto hal -abuurka iyo ikhtiyaarada la heli karo taas oo horseedaysa koboc dhaqaale.
Iyada oo ay ku badan yihiin dadka New York, dhammaan machadyada bangiyada ayaa ugu sarreeya cayaartooda oo bixiya adeegyo aad u wanaagsan oo ay adag tahay in laga helo magaalooyinka kale.
Kuwa soo socda ayaa ah bangiyada ugu wanaagsan New York:
1. Bangiga JPMorgan Chase
Bangigani wuxuu bixiyaa fududeyn iyo raaxo heer aad u cajiib ah. Macmiil cusub ahaan, waxaad kasban kartaa $ 200 oo gunno ah kadib markaad furato akoon cusub.
XIDHIIDHKA: Bangiyada ugu Fiican Magaalada Kansas Sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Waxaad si fudud uga furan kartaa koonto bangi meel kasta oo adduunka ah oo leh dulsaar aad u weyn akoonnada kaydkooda.
Bangiga Ameerika waa mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan New York oo leh ujeedka kaliya ee ah in macaamil maaliyadeed iyo maalgashi aan kala go 'lahayn. Kala xulashooyinkooda kala duwan iyo noocyada koontada ayaa ka dhigaya kuwo gaar ah.
Bangiga Ameerika wuxuu leeyahay qorsheyaal kaydin oo badan oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweynba. Heerarka dulsaarka ee deymaha ayaa si aad ah ugu hooseeya deyn -bixiyaha iyo sare ee deyn -bixiyaha.
3. Keydka Bangiga
KeyBank waa mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan New York oo bixiya adeegyo bangi oo aad u wanaagsan iyadoo la dhowrayo xeerarka masiibada ee fogeynta bulshada iyo xirashada maaskaro wejiga. Macaamiisha ayaa adeegsada kaarka ATM-ka ee wadista baabuurka maadaama dadka 65 iyo ka kor loo oggol yahay inay galaan hoolka bangiyada.
KeyBank wuxuu ku siinayaa fursad aad ku hesho koonto jeeg iyo koonto labadaba oo leh dulsaar aad u weyn. Waxaad leedahay dulsaar ah 2.740% 30-go'an iyo 2.250% 15 go'an.
4. Bangiga TD
TD Bank waa bangi weyn oo bixiya adeegyo bangiyeed shaqsiyeed oo aad u wanaagsan. Adigoo macmiil u ah bangigan, waxaad heleysaa ikhtiyaarrada maalgashiga, amaahda shaqsiyeed, taageero dhammaystiran si aad u dhisto oo u kobciso ganacsi yar iyo adeegyo lacag -dhaaf ah.
Koontada kaydka Bangiga ee TD waxay ku siinaysaa 0.25% dulsaar ah marka aad haysato dheelitirka ugu yar ee $ 250,000. Intaa waxaa dheer, waxaad ku heleysaa 0.05% dheelitir kasta iyo 0.15% dheelitirka ugu yar ee $ 50,000.
5. Bangiga CitiBank
Bangiga Citi wuxuu ballan qaadayaa waayo -aragnimo bangiyeed oo gaar ah oo bixisa qoritaan jeeg oo aan xadidnayn, $ 0 deebaajiga ugu yar ee furitaanka, iyo in ka badan 60 mashiin oo ATM ah oo aad lacag ku ururin karto.
XIDHIIDHKA: Bangiyada ugu Fiican Maryland 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Xisaabta Kaydka, waxaad ku helaysaa ilaa 0.50% dulsaarka dulsaarka iyada oo aan la hayn lacag ugu yar oo lagu dammaanad qaadi karo dulsaarka noocaas ah. Haddii aadan xiisayn koontada kaydka, waxaad sidoo kale furi kartaa koonto jeeg.
Sidoo kale akhri: Bangiyada ugu Fiican UK ee Investment
6. Bangiga Beesha
Iyada oo aan la hayn rahmadihii qarashka xiritaanka iyo fursad aad ku dalbato deyn onlayn ah, Bangiga Bulshada ayaa weli ka tarjumaya qiimahooda sare ee xiriirka macmiilka ee tayada leh. Waxay rabaan inay had iyo jeer bixiyaan qiimaha ugu wanaagsan ee macaamiishooda sharafta leh.
Haddii aad rabto inaad xisaab bangi ka furto, waxaad furi kartaa koonto jeeg ama kayd. Faa'iido dheeri ah, bangigani wuxuu ku siinayaa qorshe maaliyadeed oo kaa caawiya inaad si fudud u gaarto yoolalkaaga. Runtii, waxay weli yihiin mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan New York tayo ahaan aad u wanaagsan.
Capital One waxay ku martiqaadaysaa qof walba inuu yimaado oo uu ku raaxeysto qaab cusub oo bangiyeed. Waxay leeyihiin kelmad kooban oo macneheedu yahay “Ma aha uun bangi. Waa xaalad maskaxeed oo cusub ”. Tani waxay si fudud ula xiriiri kartaa qaab -dhismeedkooda habaysan ee kuu oggolaanaya inaad si fudud u fuliso macaamil ganacsi adigoon booqan laan.
Capital One, waxaad ku furi kartaa kaydka ama koonto jeeg. 360 Kaydkooda Waxqabadka, waxaad kasbataa 0.40% Waxsoosaarka Boqollaha Sannadlaha ah (APY) dheelitir kasta. Taasina kuma xirna dheelitirkaaga ama kuma imaanayso kharashyo bille ah.
8. Bangiga Beesha New York
Bangiga Bulshada ee New York wuxuu ku siinayaa dulsaar aan caadi ahayn koontooyinkaaga kaydka. In kasta oo dulsaarka dulsaarku khuseeyo xisaabaadka leh ugu yaraan $ 1,000, waxaad weli heli kartaa inaad hesho dulsaar hoose oo ka sarreeya $ 500.
XIDHIIDHKA: 3 Siyaabood oo Fudud oo Kaadhka Hadiyadda Visa loogu wareejiyo Koontada Bangiga waqti yar
Bangiga Bulshada ee New York waa bangiga beesha oo bixiya xisaabaadyo kala duwan oo loogu talagalay carruurta, dadka waaweyn, ardayda, iyo shaqaalaha hawlgabka ah. Nidaamkooda bangiga ee onlaynka ah wuxuu kula xiriiraa bangiyada sida ugu habboon adiga oo leh saameyn weyn.
9. Bangiga Muwaadiniinta
Bangiga Citizens waa bangiga 13 -aad ee ugu weyn tafaariiqda ee Mareykanka oo bixiya adeegyo maaliyadeed oo ballaaran malaayiin qof. Waxay noqdeen hay'ad maaliyadeed oo sarsare oo siisa fududeynta bangiyada iyo fursadaha maalgashiga kuwa haysta koontada kaydka.
Waxaad furi kartaa koontada jeegga, koontada kaydka, iyo xisaabta suuqyada lacagta. Waxaad ku heleysaa dulsaar aad u weyn koontadaada keydka iyadoo ku xiran hadhaaga xisaabtaada. Heerarkoodu wuxuu u dhexeeyaa 0.1% t0 0.5%.
10. Bangiga NBT
Adeegyada bangiyada NBT way badan yihiin. Laga bilaabo helitaanka maalgelinta guriga si aad wax uga qabato dhibaatooyinka qoyskaaga, waxaad sidoo kale heleysaa qorshayaal maalgashi oo waaweyn si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto go'aanno lacag fiican.
Iyada oo ka badan $ 1,000 koontadaada bangiga, waxaad ku kasban kartaa dulsaar aad u sarreeya mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan New York.
Gebogebadii, halkan waxaa ah liis dhammaan bangiyada ugu fiican New York oo leh noocyada koontadooda, dulsaarka iyo wadarta deebaajiga ugu yar.
Bank account Type Ugu Yar Deposit Heerarka
1. Bangiga JPMorgan Chase Hubinta & Keydinta None N / A
2 Bank of America Hubinta & Keydinta $ 10 15%
3. Keydka Bangiga Hubinta & Keydinta None 2.74% (Go'an)
4. Bangiga TD Hubinta & Keydinta None 0.05%
5. Bangiga CitiBank Hubinta & Keydinta None 0.50%
6. Bangiga Beesha Hubinta & Keydinta None N / A
7. Capital One Hubinta & Keydinta None 0.40%
8. Bangiga Beesha New York Hubinta & Keydinta None 0.25%
9. Bangiga Muwaadiniinta Hubinta & Keydinta None 0.3%
10. Bangiga NBT Hubinta & Keydinta None 0.4%
Bangiga Caanka ah - Bangiyada iyo Adeegyada Maaliyadeed
30 goobood oo loogu tago dhalashadaada | Carruurta & Dadka Waaweyn
Bangiyada ugu Fiican Gobolka Washington sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Debaajiga Ugu Yar
Waayo-aragnimada bangiyada waxay kuu noqon kartaa safar xiiso leh adiga degane Washington ahaan; kaliya waa inaad…
Nasiib ma u leedahay inaad hesho bangi gaar loo leeyahay? Ka warran inaad leedahay maareeye hanti? Bangiyada gaarka ah…